lundi, 24 août 2020 20:03
Morondava: Taolam-paty maro hita tao ambadiky ny Kianja monisipaly
Nahitana taolam-paty miisa 80 miaraka amin'ny potipotiny tao Andranovory ambadikiny Stade Municipal Morondava Centre. Nanome 24 ora ny Kaominina Ambonivohitry Morondava ka rehefa tsy miseho ny tompony io taolam-paty io dia horaisiny ny andraikitra amin'ny fandevenana ireo taolana. (Jereo Sary Tohiny)
lundi, 24 août 2020 20:01
Fanadinana BEPC: Ho tanterahana ny 21 hatramin’ny 24 septambra 2020
Nisy fihemorana ka ho tanterahana ny 21 hatramin’ny 24 septambra 2020 ny fanadinana an-tsoratra BEPC sy ny fifaninanana hidirana Seconde, raha toa ka ny 14 ka hatramin’ny 17 septambra 2020 no nambara tapa-bolana lasa.
Niainga androany maraina teny Ivato ny andiany manaraka amin’ireo Frantsay sy mizaka ny zom-pirenena frantsay niazo an’i Frantsa. Niisa 408 izy ireo no nandray ny sidina Tanà-Paris an'ny Air France. Nentin’ny fiaramanidin’ny Tsaradia avy any Antsiranana niakatra teto Antananarivo ny mpandeha sasany, ny hafa avy any Toamasina nentina tamin’ny fiarabe. Nifarimbona tamin’ny fandrindrana ny dian’izy ireo ny MDA-Aventour, Tsaradia ary ny Ambasady frantsay eto Madagasikara. (Jereo Sary Tohiny)
Nahoraka eran’ny tanàna ary niparitaka tamin’ny tambazotra facebook fa vaky ny fonjan’i Farafangana androany. Maromaro ny gadra tafatsoaka, nanararaotra ny andro alahady mangingina. Raikitra ny hazalambo, nifarimbona ny mpitandro ny filaminana. Nisy ny fanapoahana basy. Nisy tamin'ireo gadra nitsoaka mantsy no voalaza fa nahazo basy. Maro tamin’ireo gadra nitsoaka no maty voatifitra.Mbola mitohy ny fikarohana ireo tafatsoaka. (Jereo Sary Tohiny)
samedi, 22 août 2020 22:53
Fahamehana ara-pahasalamana: Nitarina 15 andro, ary mihatra avy hatrany manomboka ny 22 Aogositra 2020
Mipetraka eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara ny «Fahamehana ara-pahasalamana» manomboka ny 22 Aogositra 2020, ary mihatra avy hatrany. Noraisina nandritra ny Filankevitry ny Minisitra androany sabotsy 22 aogositra ny didim-panjakana mamaritra izany, taorian’ny fakan-kevitra natao tamin’ny Filohan’ny Antenimieram-pirenena, ny filohan’ny Antenimieran-doholona ary ny Filohan’ny Fitsarana avo momba ny Lalàmpanorenana. Hohazavain’ny Filoham-pirenena mandritra ny fandaharana manokana ao amin’ny Televizionina Malagasy rahampitso alahady 23 aogositra, amin’ny 08 ora alina, ireo fepetra rehetra sy ny andinidininy mikasika ny lamina sy ny fandrindrana rehetra hoentina miatrika ny 15 andro manaraka.
samedi, 22 août 2020 12:15
Toamasina: Misokatra ny fitaterana an-dranomamy
Nisokatra nanomboka ny 20 aogositra 2020 ny fitaterana an-dranomamy mampifandray amin’i Toamasina taorian'ny Naoty navoakan’ny APMF. Miverina amin'ny asany ireo mpitatitra amin'ny lakandranon'ny Pangalana, saingy tsy maintsy manaja ny fepetra fisorohana amin'ny valanaretina coronavirus.
samedi, 22 août 2020 09:42
Fodian'ireo Malagasy anainga avy Paris: Nahemotra ny sidina
Noho ny olana ara-tekinika ny fiaramanidina Air Madagascar dia ahemotra ny dian'ireo mpandeha hiazo an'ny Madagasikara tokony hanainga ny alahady 23 aogositra amin'ny sidina MD51.
samedi, 22 août 2020 09:17
Sidina manokana: Niverin-dalana ilay fiaramanidin’ny Air Madagascar nitondra mpianatra
Antsasak’adiny mahery taorian’ny niaingany teo amin’ny seranam-piaramanidina Ivato, ny alin’ny zoma 21 aogositra, dia niverin-dalana ilay sidina manokana MD 50 an’ny Air Madagascar nitondra mpianatra hiazo an’i Paris. Nisedra olana teknika ilay fiaramanidina nony teny ampasidinana, tsy nety nahazo haavo tokony hizorany ary koa tsy afaka nivoy tena, ka nanapa-kevitra ny mpanamory fa hiverin-dalana ary tafa-petraka soamantsara teo Ivato. Nampandrenesina ny ray aman-dreny sy fianakavian'ireo mpianatra tao anatiny, izay nisy ankizy tsy ampy taona roa, haka ny zanak'izy ireo. (Jereo Sary Tohiny)
Lehilahy iray teratany frantsay voatana am-ponja vonjimaika ao amin’ny fonjaben’i Marofoto, teratany italiana iray namany arahi-maso ara-pitsarana. Nitahiry sokatra miisa 27 tao an-tranony, tsy nahazoana alalana ilay vazaha frantsay no niampangana azy.Tsy biby fiompy ny sokatra sy ny gidro ka voarara ny mitahiry an-trano azy, hoy ny fanazavana.
Noraisina nandritra ny filankevitry ny minisitra natao teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha omaly ny fiantsoana hivory ny Antenimiera roa tonta ao anatin’ny fivoriana tsy ara-potoana tsy mihoatra ny 12 andro manomboka ny 26 Aogositra 2020. Lahadinika amin’izany ny mikasika ny « Commission Mixte Paritaire » ho entina mandany ny volavolan-dalàna laharana 001/2020 tamin’ny 26 Febroary 2020 araka ny voafaritra ao anatin’ny andininy faha 96 ao amin’ny Lalampanorenana.
Page 7 sur 591